A Moment withaMyanmar Language Teacher from the Cradle of Diplomats | China-Myanmar – China Report ASEAN
A Moment withaMyanmar Language Teacher from the Cradle of Diplomats | China-Myanmar
May 29, 2018 China Report ASEAN China-ASEAN One comment
“We will produce more students who haveagood command of Myanmar language in the future and we’re still trying at present.” said withasmile by Ms. Zhao Jin, Myanmar language teacher and associate professor at BFSU.
After walking through the archway of BFSU or Beijing Foreign Studies University, neat buildings andapool with flowers around are noticeably eye-catching to every passer-by.
The most interesting building is the library in the university campus. The façade of the library is decorated with the word “Library” in various foreign languages.
BFSU is one of the top universities in China and offers 83 international languages. There are Chinese students who major in Myanmar language at the university. Enthusiasm and passion can be seen on their faces.
Tr. Zhao Jin, who has been teaching those students and has 20 years of experience in teaching, is originally Chinese. She is currently teaching not only students from BFSU but also other people who want to learn Myanmar language.
She visits Myanmar at least onceayear. Her Myanmar language fluency level is very high. She first arrived in Myanmar asathird-year student back in 1997 and studied there forayear. Then, she worked asasecond secretary at Chinese embassy in Yangon, Myanmar from 2014 to 2017. At that time, she lived in Yangon with her family and she sent her son to an international school there. Now her son sometimes tells her that he misses Myanmar.
Chinese language universities are famous for their curriculums and teaching methodologies. BFSU, where Ms. Zhao Jin is currently teaching, started asaRussian language team and has already produced over 90,000 expats in languages and international affairs. Moreover, there are doctoral programs in foreign language and culture, Chinese language and culture, journalism, political science, law, science and industrial management in the university.
The teacher, who perceives the students should be taught not only language but also its culture and history. She has receivedaPhD. in 2017, her thesis was about “Bagan Culture”. (Bagan wasafamous ancient kingdom in Myanmar)
“Myanmar people’s customs and traditions, mindset, perceptions and thoughts are basically based on Theravada Buddhism. That’s why Myanmar people are polite and kind-hearted. You can know more about the country of Myanmar after you learn Myanmar’s traditions.” said the teacher.
Ms. Zhao Jin has beenateacher in BFSU since she graduated from the same university in 1997. She also stressed that she is trying to produce more Myanmar language expats to promote mutual relations between China and Myanmar.
As she is originally from Bao Shan, Yunnan Province, she is not unfamiliar with Myanmar. She knew about Myanmar in her childhood.
“I have known about Myanmar since I was very young. I used to envy Myanmar when I was young because most snacks, food and clothes we bought came from Myanmar. China was poor and it was difficult for people to find enough food. As there were only few local snacks, most snacks were imported from Myanmar. When I was young, I had neighbors whose relatives were living in Myanmar. I used to envy them because they had food and clothes sent by their relatives from Myanmar,” the teacher recalled.
As she has visited Myanmar several times, she’s been to Myanmar most famous attractions and tourist destinations. She expressed that her favorite thing about Myanmar is the beautiful environment. Currently she is learning about Myanmar’s ancient history, especially Pyu kingdom (Myanmar’s famous ancient kingdom).
“I have read the poem called ‘Biao Guo Yue’ when I was young. I didn’t know this was where the Pyu Kingdom was. But I realized that it was an ancient kingdom in Myanmar after I learned Myanmar language,” she recalled.
She also said that they had many difficulties in learning Myanmar language because it was very difficult to get Myanmar books, magazines, and audio files before 2010. The main reasons were that there were few books published in Myanmar and her department did not have enough budget allocation to buy books before 2010. But now, it is getting easier and easier to get Myanmar books as many books are now being published in Myanmar and her department allocates enough budget to buy books.
According to the information provided by the official website of the university, over 400 ambassadors, over 1,000 consuls, diplomats, interpreters, translators, journalists, businessmen, lawyers and bankers have come out from this university. BFSU is also known as the “Cradle of Diplomats” as it has producedalot of diplomats.
“မြန်မာဘာသာစကားကျွမ်းကျင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေအများကြီး မွေးထုတ်ပေးဖို့ ကြိုးစားမယ်၊ အခုလည်း ကြိုးစားနေပါတယ်” လို့ မြန်မာလိုပီပီသသနဲ့ ပြုံးပြုံးကြီး ပြောလိုက်တာက BFSU မှာ မြန်မာစာသင်ပေးနေတဲ့ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဆရာမဒေါ်စောကြည် ခေါ် (Ms. Zhao Jin) ပါပဲ။
BFSU သို့မဟုတ် Beijing Foreign Studies University (ဘေဂျင်းနိုင်ငံခြားဘာသာလေ့လာရေး တက္ကသိုလ်) မုခ်ဦးကနေ ဖြတ်ဝင်လိုက်ရင်ပဲ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ရှိနေတဲ့ အဆောက်အဦးတွေရယ်၊ ဘေးပတ်လည်မှာ ပန်းတွေပွင့်နေတဲ့ ရေကန်အငယ်စားလေးရယ်က သတိမထားမိဘဲ မနေနိုင်အောင်ကို မျက်စိပသာဒဖြစ်နေပါတယ်။
ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာကတော့ တက္ကသိုလ်ထဲက စာကြည့်တိုက်ပါပဲ။ စာကြည့်တိုက် ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို မြန်မာဘာသာအပါအ၀င် ကမ္ဘာပေါ်ကဘာသာပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ အင်္ဂတေမှာ ထွင်းပြီး စာကြည့်တိုက်မျက်နှာစာကို အလှဆင်ထားတာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ အထင်ရှားဆုံးတက္ကသိုလ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဘာသာစကားပေါင်း ၈၃ မျိုး သင်ကြားပေးနေတဲ့ BFSU မှာ မြန်မာစာအထူးပြုနဲ့ ကျောင်းတက်နေကြတဲ့ တရုတ်ကျောင်းသား တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပထမနှစ် မြန်မာစာအထူးပြု အသက် ၁၈၊ ၁၉ ၀န်းကျင် တရုတ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူလေးတွေရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ စိတ်အားတက်ကြွနေမှုကို အထင်းသား တွေ့နေရပါတယ်။
ဒီကျောင်းသားလေးတွေကို မြန်မာစာသင်ပေးနေတဲ့ ဆရာမဒေါ်စောကြည်ကတော့ စာသင်သက် ၂၁ နှစ် ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး တရုတ်လူမျိုးစစ်စစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမဟာ လက်ရှိ BFSU က ကျောင်းသားတွေ အပြင် မြန်မာစာလေ့လာချင်တဲ့ အပြင်က တခြားတရုတ်လူမျိုးတွေကိုလည်း မြန်မာစာ သင်ကြားပေး လျက် ရှိပါတယ်။
ဆရာမဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကို အနည်းဆုံး တစ်နှစ်တစ်ခေါက် သွားနေတဲ့သူဖြစ်ပြီး မြန်မာစကားကို မြန်မာတစ်ယောက်နဲ့မခြား ချောချောမွေ့မွေ့ ပြောနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမ ဒေါ်စောကြည်ဟာ ၁၉၉၇ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းလာတက် တုန်းက ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ဖူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၁ နှစ်ကြာ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တရုတ်သံရုံးမှာ ဒုတိယအတွင်းဝန် အနေနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူ ရန်ကုန်မှာ နေထိုင်ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့သားငယ်လေးကိုလည်း ရန်ကုန်က international school တစ်ခုမှာ ကျောင်းထားပေးခဲ့ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံက ဘာသာစကားတက္ကသိုလ်တွေဟာ ဘာသာစကားသင်ကြားတဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း တွေနဲ့ပတ်သက်ရင် နာမည်ကြီးပါတယ်။ အခုလက်ရှိ ဆရာမဒေါ်စောကြည် စာသင်ပေးနေတဲ့ BFSU ဟာ ၁၉၄၁ ခုနှစ်မှာ ရုရှားဘာသာစကားအဖွဲ့အနေနဲ့ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျောင်းတည်ထောင်ချိန်ကနေစလို့ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်အတွင်း ဘာသာစကားနဲ့ နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင် ပညာရှင်ပေါင်း ၉ သောင်းကျော်ကို မွေးထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒီတက္ကသိုလ်မှာ ဘာသာစကားအပြင် နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနဲ့စာပေ၊ တရုတ်ဘာသာ စကားနဲ့စာပေ၊ ဂျာနယ်လစ်ဇင်၊ နိုင်ငံရေးသိပံ၊ ဥပဒေ၊ သိပံနဲ့ စက်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးဘာသာရပ်တွေမှာ လည်း ဒေါက်တာဘွဲ့အထိ သင်ကြားပေးတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေကို ဘာသာစကားအပြင် အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ သမိုင်းကိုလည်း သင်ပေးသင့် တယ်လို့ ခံယူထားတဲ့ ဆရာမဒေါ်စောကြည်ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ပုဂံယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့စာတမ်းနဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
“မြန်မာလူမျိုးရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေ၊ စိတ်နေသဘောထားတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေက ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တယ်၊ စိတ်သဘောထားကောင်းတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကို နားလည်မှ မြန်မာနိုင်ငံကို တကယ်နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” လို့လည်း ဆရာမက ပြောပါတယ်။
ဆရာမဟာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ ဒီကျောင်းကနေပဲ မြန်မာစာအဓိကနဲ့ ဘွဲ့ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်ကနေစလို့ ဒီကျောင်းမှာ ဆရာမအဖြစ် ပြန်လည် လုပ်ကိုင်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ တရုတ်နှစ်နိုင်ငံအကြား အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုမြှင့်တင်ဖို့အတွက် အရည်အချင်းရှိပြီး မြန်မာစကားကျွမ်းကျင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေအများကြီးကို မွေးထုတ်ပေးဖို့ ကြိုစားနေတယ်လို့ ဆရာမက ဆိုပါတယ်။
ဆရာမဟာ ယူနန်ပြည်နယ်၊ ပေါက်စန်းမြို့ (Bao Shan) ဇာတိဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မစိမ်းပါဘူး၊ မြန်မာပြည်အကြောင်းကိုလည်း ငယ်ငယ်လေးကတည်းက သိထားသူဖြစ်တဲ့အကြောင်း အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျမကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက မြန်မာပြည်ကိုသိတယ်၊ အားကျတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကစားတဲ့ သရေစာတွေ၊ မုန့်တွေ၊ ၀တ်တဲ့အ၀တ်အစားတွေက မြန်မာပြည်က လာတာများတယ်။ ကျမငယ်ငယ်တုန်းက တရုတ်ပြည်က ဆင်းရဲတယ်။ ပြည်သူတွေ ၀အောင်စားတာတောင်ခက်တယ်။ မုန့်တွေသရေစာတွေက သိပ်မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်က သွင်းလာတဲ့မုန့်တွေပဲစားတာ များတယ်။ ဟိုတုန်းက အိမ်နီးချင်းတွေမှာ မြန်မာပြည်မှာအမျိုးရှိတဲ့ အိမ်တွေရှိတယ်။ သူတို့က မြန်မာပြည်က ပို့လာတဲ့အစားအစာတွေ၊ အ၀တ်အစားတွေ အမြဲရှိလို့ သူတို့ကို အရမ်းအားကျပါတယ်။”
ဆရာမဟာ မြန်မာပြည်ကို အကြိမ်ကြိမ်ရောက်ဖူးသူဖြစ်တဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံက အထင်ကရနေရာ တော်တော်များများကိုလည်း နှံ့စပ်အောင်ရောက်ဖူးသူဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သာယာလှပတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ဆရာမအနေနဲ့ မြန်မာရှေးဟောင်း သမိုင်းကို လေ့လာနေပြီး ပျူနိုင်ငံတော်အကြောင်းကို အဓိကလေ့လာလျက်ရှိပါတယ်။
“ကျမငယ်ငယ်တုန်းက ပျူတေးအသံ(Biao Guo Yue) ဆိုတဲ့ကဗျာကိုဖတ်ဖူးတယ်။ ဟိုတုန်းက ပျူနိုင်ငံဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံလဲမသိဘူး။ မြန်မာဘာသာသင်ပြီးမှ ပျူနိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ ကျမသိလာတယ်။” လို့ ဆရာမက ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၀ မတိုင်ခင်က မြန်မာဘာသာကို သင်ယူရတာ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပြီး စာအုပ်စာတမ်းတွေ၊ မဂ္ဂဇင်းစာစောင်တွေ၊ အသံဖိုင်တွေ ရဖို့ တော်တော်လေးကို ခက်ခဲခဲ့တယ်လို့ ဆရာမက ပြန်ပြောင်း ပြောပြပါတယ်။ အဓိက အကြောင်းကတော့ ၂၀၁၀ မတိုင်ခင်ကာလတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထွက်ရှိတဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေ နည်းပါးခဲ့တာလည်း ပါသလို ကျောင်းက ဘတ်ဂျတ် ချပေးတာလည်း နည်းပါးခဲ့တာ ပါပါတယ်။ အခုတော့ ကျောင်းက စာအုပ်ဝယ်ဖို့ ဘတ်ဂျတ်တွေ ပိုပြီးချပေးလာသလို မြန်မာနိုင်ငံကလည်း စာအုပ်တွေ ပိုထုတ်လာကြတဲ့ အတွက် အဆင်ပြေလာတယ် လို့ ဆရာမက ပြောပါတယ်။
BFSU တက္ကသိုလ်ရဲ့ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရဆိုရင် ဒီတက္ကသိုလ်ကနေ သံအမတ်ကြီးပေါင်း ၄၀၀ ကျော်နဲ့ ကောင်စစ်ဝန်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်အပြင် သံတမန်တွေ၊ စကားပြန်/ဘာသာပြန်တွေ၊ ဂျာနယ်လစ်တွေ၊ စီးပွားရေးသမားတွေ၊ ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သံတမန်ပေါင်းများစွာကို မွေးထုတ်ပေးတဲ့ တက္ကသိုလ် ဖြစ်လို့ BFSU ဟာ “Cradle of Diplomats” (သံတမန်များရဲ့ဘူမိနက်သန်) လို့တောင် လူသိများပါတယ်။
Previous Post: BFSU freshman: Myanmar Language isaBeautiful Language | China Unlocked
Next Post: SCO, A Tremendous Opportunity for Both China and the World|VOICE
A.M.Tharindu Nimna Abeysinghe says:
Dear mam,I want to learn miyanmar language.becose developed to my carries & my professional life.how can I learn miyanmar language and can you given some information.